मिलन विश्वकर्मा । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुन मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार बीमाबाट रू. १ अर्ब ८८ करोड प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन् । बीमा समितिले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । तथ्याङ्कअनुसार फागुनसम्ममा १८ लाख २६ …
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या नसुल्झिएपछि समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग गुहार मागेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन आयोजना भए पनि अधिकांश भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्छ । आयोजनाले १० वर्षदेखि पटकपटक पहल गर्दासमेत विदेशी मुद्रा सटहीमा …
जनार्दन बराल । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७४।७५ (सन् २०१८) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल सरकारले बजेटमार्फत यस वर्ष ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरे पनि …
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन : अर्थ मन्त्रालय नै शुद्ध हुन सकेन
सरकारी हिसाब मिलान हुन नसकेको बेरुजु पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आवको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निकालेको हो । आव २०७३÷०७४ मा सरकारको अनियमित खर्च तीन खर्ब ९६ अर्ब थियो । योे …
नमुना बन्दै महिला सहकारी
प्रज्वल पहाडी । प्यूठानमा सञ्चालित महिला सहकारी संस्थाहरू सफल बन्दै गएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले आयआर्जन गरेको रकम बचत गरी उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका सहकारीहरू अहिले आत्मनिर्भरसँगै नमुना सहकारीको रूपमा परिचित भएका हुन् । ०६२।६३ सालदेखि …
गैससको लघुवित्त बैंकमा स्तरोन्नति अन्योलमा
यादव हुमागाईँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्तको कारोबार गर्ने इजाजत पाएका गैरसरकारी संस्थाको लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नति अन्योलमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले गैससहरुलाई बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि पछिल्लो पटक २०७४ चैतसम्मको समय दिएको थियो । उक्त समयसीमा सकिन लाग्दा पनि …
कम्पनी नजाँदा सहकारीले गर्छन् कृषि बीमा
बीमा कम्पनीहरू ग्रामीण भेगमा पुग्न नचाहेकाले वास्तविक किसानको पहुँचमा बीमा पुग्न नसकेको कृषकहरूले बताएका छन् । किसान आयोगद्वारा सोमबार आयोजित नेपालमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको वर्तमान अवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषकहरूले वास्तविक कृषकहरूसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन् । साथै, …
स्वास्थ्य बीमाका १५ प्रतिशत सेवाग्राहीले गरेनन् नवीकरण
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार नभएसम्म नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतबार दोस्रो स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी संस्थाहरूले बिमितलाई राम्रो सेवा नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । नागरिकको उपचार गर्न पाउने …
तुलसी सुवेदी । देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सरकारी संरचनाहरू संघीय ढाँचाअनुसार परिमार्जन हुँदै छन्। अन्य सबै संरचना संघीय ढाँचाअनुरूप रूपान्तरित हुँदै छन्। देश संघीय संरचनामा रूपान्तरित हुँदै गर्दा बीमाको मोडल भने टुंगो लागिसकेको छैन । बीमा समितिको मोडल कस्तो …
सेयरमा लगानी घट्दै
सर्वसाधारणको लगानी रहेको यस्ता फण्डहरूले मुद्दती निक्षेप र सेयरमा लगानी गर्छन् । यस्तो लगानीबाट भएको नाफाको आधारमा सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल दिने गरिन्छ । केही समययता म्युचुअल फण्डहरूले बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा बढी लगानी गर्न थालेका छन् । गत माघ मसान्त र फागुन …
बीमाका सीईओलाई पनि ‘कुलिङ पिरियड’
अब बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि कुलिङ पिरियड लागू हुने भएको छ । संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले बीमा समितिले कुलिङ पिरियड लागू गर्न लागेको हो । समितिले बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मार्फत कुलिङ पिरियड व्यवस्था गर्ने विषयमा …
विदेशी वित्तीय संथाबाट ८० अर्ब कर्जा पाउने
काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि यो सम्भव भएको हो। राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारमा तरलता …
सहकारीमा ब्याजदर व्यवस्थित गर्न सन्दर्भ दर तोकिने
यादव हुमागाई । सहकारी संस्थाको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘सन्दर्भ ब्याज दर’ तोक्ने भएको छ । सहकारीले जथाभावी ब्याज दर लिएको गुनासो बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनमार्फत नै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । सहकारी ऐन—२०७४ को दफा ५१ मा …
मेनुका कार्की । काभ्रे नवबुद्धकी सुमित्रा रिजालले दैनिक तीन वटा सहकारीमा एक हजारभन्दा बढी रकम बचत गर्दै आएकी छन्। उनले गर्ने बचत भने व्यापारमा भर पर्छ। ‘राम्रो व्यापार हुँदा धेरै बचत गर्छु’, उनले भनिन्, ‘कम हुँदा पनि नियमित बचत भने …
फागुन महिनामा म्युचुअल फन्डको अवस्था
नबिल इक्विटी फन्डको प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य ८.६६ नबिल म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फन्डको फागुन महिनामा प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य रू. ८ दशमलव ६६ पुगेको छ । गत महिना यस योजनको प्रतिइकाइ खुद मूल्य रू. ९ दशमलव शून्य ८ …